भिडियो Archives - Sawal Nepal
२९ चैत, काठमाडौं । थालिस्मिया रोगबारे जनचेतना जगाउने उदेश्यले बास्तविक कथामा आधारित गित सोचे भन्दा फरक संसार दर्शकमाझ आएको हो । काठमाडौंमा एक समारोहबीच यो गितको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ । १७ वर्ष थालिस्मिया रोगबाट आफ्नो छोरीको उपचारका लागि छोरा जन्माएर छोरीलाई बोनम्यारो प्रत्यारोपन गराई बचाउन सफल बुबा राजु केसीले यो गित लेखेका हुन् ।यो
ललितपुर । अहिले यो टिकटक, फेस्बुक र युटयुबको जमानामा कतिबेला के भाईरल हुन्छ भन्ने कुराको केही अतोपतोनै हुदैन । आज हामी त्यस्तै रिपोर्ट लिएर आएका छौ, जुन टिकटकको १० सेकेन्डको भिडियोलाई ६ दिनमा नेपाली दर्शक तर प्राय बिदेशी दर्शकहरुले गरेर ५ करोडले हेरेर कमेन्ट गरे कुन ठाउ हो ? र यो कहा“ छ भनेर बिदेशीहरुका
काठमाण्डाै – पछिल्लो समय निक्कै चर्चामा रहेको ‘फूलबुट्टे सारी’ बाेलकाे गीतको संस्कृत भर्सन सार्वजनिक भएको छ । राजनराज शिवाकोटीको यो गीतलाई जागरण घिमिरेले संस्कृतमा गाएका हुन् । गीतका शब्दलाई के एन स्वामीले संस्कृतमा अनुवाद गरेका हुन् । गीतकाे संस्कृत भर्सनसँगै भिडियो ‘केएन स्वामी अफिसियल’ नामको युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हाे । लेजेन्डरी भर्सन अन्तर्गत हास्यकलाकार
निर्देशक दीपाश्री निरौलाले फागू पूर्णिमा नजिकै आउँदै गर्दा यस सम्बन्धी गीत सार्वजनिक गरेकी छिन् । ‘धनियाँ के होली’ बोलको गीतमा दीपा र सुमित खड्काको स्वर छ । निरज श्रेष्ठको संगीत रहेको यो गीतमा दीप नारायण राजवंशीको शब्द छ । सार्वजनिक गीतको भिडियोमा दीपकराज गिरी, दीपाश्री निरौला, केदार प्रसाद घिमिरे, किरण केसी, शिवहरि पौडेल, जयनन्द लामा,
गायकिा मेलिना राई र अनिल गजमेरको ‘मेरो जीवनको चाहना’ गीतको भिडियो सार्वजनिक
गायकिा मेलिना राई र अनिल गजमेरको आवजमा ‘मेरो जीवनको चाहना’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । रबिन टोटोको शब्दमा मनरथ कालीकोटेको संगीत रहेको छ भने रेकर्डिस्ट दिप घतानी रहेको गीतलाइ टंक लिम्बू रोमीले एरेञ्ज गरेका हुन । केशब भट्टराई र तेजश्विनी बाँस्कोटाको अभिनय रहेको ‘मेरो जीवनको चाहना’ गीतको भिडियोमा सोम मग्रातीको श्रृंगार, सागर पौडेलको छाँयाकनमा
नेपाल आइडल सिजन–२ का विजेता रवि ओडको टुटी सक्यो मुटु
काठमाण्डौं ।नेपाल आइडल सिजन–२ का विजेता रविलाई उनको निकटतम व्यक्तिले धोका दिएका थिए । यही पिडामा उनले एउटा गीत लेखे लेखेर दशरथ सुनारलाई सुनाए । रविले गीतमा आफ्नो भोगाइका कारण सिर्जित मनको बह पोखेका थिए । दशरथले हेरेर ‘ओहो १ हो‚ यो त मेरो भोगाइ हो’ भने । गीत बनाउने निधो भयो । अभिनयका लागि
विदेशिने युवाको कथा म्युजिक भिडियोमा
ह्वाइट म्युजिक स्टुडियोको प्रस्तुतिमा म्युजिक भिडियो ‘लालुमै’ सार्वजनिक गरिएको छ । मनोवादको आवाज, शब्द रचना र लय सिर्जना रहेको गीतको भिडियोलाई प्रवीण खतिवडाले निर्देशन गरेका हुन् । स्वदेशमै घर, संसार र सम्भावना हुँदाहुँदै, ठूला सपना बोकेर विदेसिने युवाहरूको घर परिवार र देश प्रतिको प्रेमको कथा हो ‘लालुमै’ । गीतको सङ्गीत संयोजन रुविन श्रेष्ठ (कुटुम्ब) ले
अभिनेत्री केकी फिल्मका लागि गरिन् कपाल मुण्डन !
काठमाडौं– अभिनेत्री केकी अधिकारीले फिल्म ‘बोक्सीको घर’ का लागि कपाल मुण्डन गरेकी छन् ।उनले कपाल मुण्डन गरेपछि ऐनाको अगाडि खिचेका तस्विरहरु इन्स्टाग्राम स्टोरीमा राखेकी छन् । उनको यो लुक्सले धेरैलाई आकर्षित गरेको छ । पहिलो पटक फिल्मका लागि आफ्नो कपाल त्याग गरेकी उनले फिल्मको कथाले मागेका कारण केश मुण्डन गरेको बताएकी छन् । कपाल नै
‘मरिसकेको मान्छेको कथा’ अब युट्युबमा (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ – उज्यालो मल्टिमिडियाले तयार पारेको वृत्तचित्र ‘मरिसकेको मान्छे’ अब युट्युबमा हेर्न पाइने भएको छ । उज्यालोको युट्युब च्यानल उज्यालो टीभी र हेर्ने कथाको युट्युब च्यानलमा यो वृत्तचित्र हेर्न सकिने छ । ‘मरिसकेको मान्छे’ मरे भनेर काजकिरिया भइसकेका तर जिउँदै फर्केका र बाँचे भनेर आश गरिएका मानिस पहिले नै मरेको मानिसको कथा हो । पूर्वको
मोरगंमा एउटा अनौठो घटना भएको छ । विवाह सम्पन्न भएकै राति केही युवक घरमा पसे बेहुलीलाई घाइेत बनाएर गहना लुटेर लगे । विवाहमा जम्मा भएको पैसा पनि लिएर गएको स्थानियले बताएका छन् । विवाह भएकै दिन किन गु ण्डा घरमा प्रवेश गरे, वेहुलीलाई नै किन निसाना बनाए ? यो अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ । घटनामा